Nhau - Ge 9ha.02 gasi turbine yakabudirira kuiswa mukutengesa kwekutanga kei track 4A magetsi chirimwa muMalaysia
Ge 9ha.02 gasi turbine yakabudirira kuiswa mukushambadzira kwekutanga nguva munzira 4A magetsi chirimwa muMalaysia
Iyo SPG 1,440MW yakasanganiswa kutenderera Track 4A magetsi chirimwa muMalaysia yakabudirira kuiswa mukushambadzira kushanda. Iyi ndiyo yekutanga yepasi 9HA.02 yakabatana kutenderera magetsi magetsi kuisirwa kushanda.
GE inopa magetsi masisitimu ane HA-nhanho turnkey yakasanganiswa kutenderera magetsi ekugadzira zvivakwa uye masevhisi anofukidza hupenyu hwese kutenderera kwemasimba avo emagetsi, kusanganisira magetsi ekugadzira michina, mhinduro yedhijitari uye zvibvumirano zvebasa.
Iine indasitiri-inotungamira GE HA-kirasi gasi turbine tekinoroji, simba rekugadzira simba reTrack 4A simba chirimwa rinogona kuzadzisa magetsi emagetsi angangoita mamirioni matatu edzimba dzeMalasian.
Malaysia, Johor-Kukadzi 24 Kukadzi 2021, General Electric (inozonzi "GE"), CTCI Zhongding neSouthern Power Sdn Bhd (pano inonzi "SPG") zvakaziviswa pamwe kuti iri muPasir Gudang, Johor, Malaysia. Iyo SPG Track 4A gwenya remagetsi rakabudirira kuiswa mukutengeserana nhasi. Iyi 1,440MW yakasanganiswa-kutenderera gasi-inodzinga magetsi chirimwa ndiyo yekutanga pasi GE 9HA.02 yakasanganiswa-kutenderera gasi-iriridzwa magetsi girandi kuti iite yekutengesa kushanda. Imwe tangi turbine, imwe jenareta uye imwe yekupisa kupisa bhaira. Pamusoro pezvo, chirimwa chemagetsi chakasaina chibvumirano chebasa remakore makumi maviri nemasere pamwe neG. GE inozozvipa masevhisi uye mhinduro dzemadhijitari kubatsira iyo gadziriro yemagetsi kusimudzira kuona kwayo kweaseti, kuvimbika uye kuwanikwa. Kugadzirwa kwesimba kweTrack 4A gwenya remagetsi rinotarisirwa kuve Kusangana nemagetsi emagetsi angangoita mamirioni matatu edzimba dzeMalasia.
GE ichapa magetsi emagetsi ane yakazara yakazara mhinduro yedhijitari, magetsi emagetsi ekuvandudza masevhisi, pamwe nekuzadza muchina kuongorora uye kwehunyanzvi kubvunza masevhisi eiyo 9HA.02 gasi turbine. GE Dhijitari's Predix * yeasset performance management software APM inoongorora mashandiro eiyo gadziriro yemagetsi, ichibatsira chirimwa chemagetsi kuvandudza kuona kwayo kweaseti, kuvimbika nekuwanika, ichideredza mashandiro ekugadzirisa uye ekugadzirisa. Uye zvakare, iyo michina yemagetsi inogadzirirwa nema sensors, uye GE Monitoring uye Diagnosis (M&D) Center muKuala Lumpur ichaongorora uye kuongorora iyo data inounganidzwa nema sensors kutenderera nguva.
"GE inotanga kutanga muhuwandu hwakazara hwegasi turbines muMalaysia, uye yakaunganidza makore anopfuura makumi mana ehupfumi hwekushandisa ruzivo. "Nezvakanakira zvayakanakira, GE icharamba ichibatsira kuzadzikisa kudiwa kwemagetsi emuno kuMalaysia." GE Gesi Simba Asia Mutungamiriri uye Chief Executive Executive Officer Ramesh Singaram akadaro. "Panguva ino gE 9HA.02 turbine yegasi yakabudirira kuwana pekutanga bhizimusi rekushambadzira muMalaysia, zvichiratidza kumwe kubudirira kukuru kweye HA-class unit. Nekazvino tekinoroji, masevhisi uye mhinduro yedhijitari, GE ichapa Malaysia kutendeseka kwakawanda. , Kuchinja-chinja gasi rinodzidziswa magetsi. ”
Nezve GE Gesi Simba Renzvimbo
GE Gesi Simba iri mutungamiri muindasitiri yemagetsi yepasirese, ichipa huwandu hwakazara hwekombiki tekinoroji mhinduro uye masevhisi kubva mukugadzirwa kwesimba kuenda mukushandisa, ine matekinoroji epasi rose kiyi: magasi turbines, majenareta, yekuwedzera yekugadzira, yemagetsi simba kugadzirwa, kutonga system mhinduro, Service uye zvirimwa-zvakapamhama mhinduro. Isu tine hukuru hwepasirese hwakazara hunowanikwa huwandu hwemagetsi emagetsi, ane anopfuura mazana emamiriyoni mazana matanhatu emaawa ekushanda. GE magetsi emagetsi anoramba achivandudza uye achishanda nevatengi kugadzira ramangwana matekinoroji emagetsi ekuvandudza magetsi ekugadzira network panogara vanhu.
Post nguva: May-08-2021